Ngamnye wethu uncike kwiimpembelelo zeengxaki. Sakhuliswe ngabantu abanobuchule obuninzi. Ukuba ngaba kuya kukwazi ukufundisa abantu ngoncedo lwamashishini, oko akuyi kuguqula imeko, kwaye ekubeni umntu engakwazi ukuhlala yedwa, ngoko, ekungeneni kwintlalo yoluntu, wayeya kufumana inani elincinci leengxaki. Kule nqaku siza kuqwalasela izizathu zokubonakala kweengxaki kwaye uzame ukuphendula umbuzo othi: "Indlela yokufumana ukuzithemba nokuphelisa izinto ezinzima."
Zivela phi izakhiwo?
Yonke into ilula kakhulu kwaye ngexesha elifanayo kunzima. Ukusifeza nge "esi sifo" ngabo bathatha inxaxheba ekukhulisweni kwethu - abazali, ugogo, ootata, ootitshala, ootitshala, njl njl. Kakade, abazenzeli ngamabomu ukungaqiniseki, ukwesaba kwaye mhlawumbi i-phobias. Imfundo yindoda yenzululwazi kakhulu. Izigidi zenzululwazi zisebenza kule ntsimi, unyaka wonke ulwazi oluninzi lupapashwa kwimfundo, kodwa ingcamango "yemfundo echanekileyo" ayizange iphuhliswe okwamanje. Umbhali ngamnye unikeza iingcebiso zakhe ngendlela yokuziphatha ngokufanelekileyo nangokufanelekileyo xa ukhulela umntwana. Kodwa nangona kwaye ngokulandelelana ngokulandelelana imiyalelo ekhethiweyo, umntu uya kukhula alahlekise izinto ezinzima. Isizathu kukuba kulo mzekelo umntu uya kuba engenalo uthando, uya kuhlala kuphela ngomyalelo. Kwaye ngamnye kuthi ufuna iimvakalelo, kwaye kungekhona nje eyethu, kodwa nabangaphandle.
Iinkomfa zilula kakhulu ukuzifumana, kodwa kunzima ukuzisusa. Ngokomzekelo, umama ebuntwaneni bakhe akazange abonise uthando olukhethekileyo kumntwana, kwaye unokuhlakulela ubunzima obuphantsi. Okanye utata uya kuxela unyana wakhe "ukuba uyabhonga, ngaba le ntombazana? Ndicinga ukuba ndinekhwenkwe," okanye intombi yam "intombazana kufuneka ibe yinto efanelekileyo, kwaye unento encane engcolileyo, nje ingulube." La magama anjalo alula, kodwa athi entliziyweni, unokushiya umkhondo emphefumlweni womntwana. Kwaye oku kulandela ubomi bakhe bonke. Inkathazo yintonga kwaye igxilwe, kwaye iba yinxalenye yomntu.
Iintlobo zineenkalo ezithile. Zibonakaliswa kuphela xa ziboniswa ngumntu ocinga ngayo. Vumelana ukuba kaninzi asinakhathalela ukuba umntu ongaziwayo uya kuthi ntoni ngathi, engafanelekanga nayiphi na inhlonipho kuthi. Kodwa ukuba into esondeleyo kuthi isitsho into engathandeki kuthi, inokusihlazisa kwaye ibenokubangela uxinzelelo.
Enye inkalo yeengxaki zizinto ezitsha zibonakaliswa kubantu abanobubunzima obuphantsi. Abantu abazithembayo ngokuqinisekileyo ababonakalwanga kwingozi. Awuyihlungi ulwazi oluyidingayo okanye aluyihoyi ngokupheleleyo.
Indlela yokukrazula izakhiwo kunye nokuzithemba
Musa ukhathazeka kwaye ungakhathazeki. Oku kukuthintela ukwamkelwa kwesigqibo esifanelekileyo. Ukongeza, ukwesaba kunye nemvakalelo kunempembelelo embi kwimpilo. Kwaye ukuba bahambe, zama ukumomotheka nokuhleka ngaphezulu. Ndikholelwe, kulula kakhulu kunye nokuhle ngakumbi ukuhlala, ukuhamba ebomini ngoxolo kunye nethemba. Ukugxininisa ngokugqithiseleyo ingqalelo kwiindawo zabo eziyinkimbinkimbi, abantu ngokwabo baphukisa ukuphuhliswa kwabo. Ngokuqhelekileyo, apho abaninzi bethu benza izinto ezinzima, sinokuzibonakalisa njengobumnandi, njengento ebalulekileyo, ekwazi ukuhlula kwabanye. Kodwa impumelelo incike kuphela kwisimo sakho sengqondo. Isimo sengqondo esilungileyo kuwe, ukusilela kwakho kunye neziqhamo ziyakunceda ulahlekelwe iinkomfa.
Qala ukukholelwa kuwe. Yiba nethemba kuyo yonke into oyenzayo. Zama ukukholisa okokuqala kuqala, kuba wonke umntu akayithandi. Ungesabi ukubonisa ukuzithemba kwakho. Akumele uqiniseke kuwe kuphela nangamazwi akho, kodwa uthethe inyaniso kwaye uphile ngokuhambelana nale nyaniso. Oku kuya kukwenza ube ngumntu ovuya ngokwenene. Uqala ukuhlonipha abanye, uya kuthandwa. Kodwa uthando luyona nqanaba eliphezulu kunoma luphi ubudlelwane. Ubomi bakho buya kuba mnandi kwaye bukhanyise.
Khumbula, umphumo wokulwa neziinkalo, kunye nakweyiphi enye into eyenziwa, inokufunyanwa ngenxa yemibandela emibini-ukholo kunye nesenzo. Ngoko kholelwa kuwe kwaye wenze, kwaye uya kuphumelela.
Iibangela kunye nemiphumo yokuhlukunyezwa kwabasetyhini
Indlela yokuba ngumfazi oyisilumko kunye namadoda
Inkonzo yothando, ngokubhekiselele kubafazi
Indlela yokuyeka ukucaphukisa umhlobo wakho
Yeka umntu, uncedo lwengqondo
Amalungelo kunye nemisebenzi yabahlobo abakhulu
Ukuqala kwesondlo sokuqala esongezelelweyo
Indlela yokwenza i-pompom isitya?
Nini ukuqala ukunika abantwana abancinci?
Ndingayisebenzisa njani ngoFebhuwari 23?
Ukukhulelwa kwe-Ectopic. Izizathu, ukuxilongwa
Indlela yokuqonda iimvakalelo zakho ngomntu
Imithetho eyisixhenxe yegolide: indlela yokuziphatha ngayo, ukuze umntu akwesaba ukulahlekelwa nguwe
Iimbambo zengulube kwi-multivariate
Izithintelo zokukhusela kwabasetyhini: iindandatho ze-hormonal
Umbhobho wombane owenzeka ngokusondeleyo kumntwana
Indlela yokutshala utshani obomatshini
Ukulungiswa kobunzima obunzima kumntwana
Indlela yokunceda umyeni wakhe aphile kwintlungu yobudala obuphakathi
Yintoni okufanele ibe yindoda yangempela